ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား)| November 18, 2012 | Hits:1
| | နေပြည်တော်တွင် လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်မှ စတင်ကျင်းပမည့် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ကျင်းပမည့် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ “SOUTH EAST ASIA GAMES” ဖြစ်သည်။ ယခင် ၁၉၆၁ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အားကစားပြိုင်ပွဲတို့မှာ အရှေ့တောင် အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစားပြိုင်ပွဲ “SOUTHEAST ASIA PENINSULA GAMES” သာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်းဆွယ် အားကစားပြိုင်ပွဲကို ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပရမည့် ၃ ကြိမ်မြောက် ကျွန်းဆွယ် အားကစားပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက လက်ခံကျင်းပပေးခြင်း မရှိသဖြင့် ကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲကို ၁၉၅၉ မှ ၁၉၇၅ အတွင်း ၈ ကြိမ်သာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၉ ကျွန်းဆွယ် ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအားကစား မောင်မယ်များ ဆွတ်ခူးခဲ့ကြသည့် ဆုတံဆိပ်များမှာ ပြေးခုန်ပစ် ရွှေ ၂၀ ခု၊ ငွေ ၁၃ ခု၊ ကြေး ၉ ခု တို့ဖြစ်သည်။ လက်ဝှေ့ – ရွှေ ၇ ခု၊ ငွေ ၁ ခု၊ ကျွမ်းဘား – ရွှေ ၇ ခု၊ ငွေ ၆ ခု၊ ရေကူး – ရွှေ ၄ ခု၊ ငွေ ၁၀ ခု၊ ကြေး ၁၀၊ သေနပ်ပစ် – ရွှေ ၅ ခု၊ ငွေ ၉ ခု၊ ကြေး ၃ ခု၊ တင်းနစ် – ရွှေ ၁ ခု၊ ဘော်လီဘော – ရွှေ ၂ ခု၊ အလေးမ – ရွှေ ၆ ခု၊ ငွေ ၁ ခု၊ ရွက်လှေ - ရွှေ ၄ ခု၊ ဘောလုံး ရွှေ ၁ ခု တို့ဖြစ် ကြသည်။
ဥရောပ ၂၁ နှစ် အောက် ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ စပိန်အသင်း ဗိုလ်ထပ်စွဲတရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်ကြပါချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ တာဝန်ယူမယ့် မော်ရင်ဟိုကောင်းသော သန့်ရှင်းသော ဆီးဂိမ်းဖြစ်စေချင်နှလုံးသားက စကားသံကို နားထောင်ပြီး ဘာစီလိုနာသို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ နေမာ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> lwinoomg November 18, 2012 - 11:38 am	100 GOLD MEDALS ARE TO MANY. NEVER MIND WE WILL GIVE A CHANCE 50% TO ALL PERSONS WHO RESPONSIBILITY FOR 100 GOLDS. SO IF IT IS NOT BECOME LIKE THEY SAID ALL THE PERSONS WHO INVOLVED IN RESPONSIBILITY SHOULD BE IN DISMISS.
တခြားဖတ်စရာများ ဥရောပ ၂၁ နှစ် အောက် ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ စပိန်အသင်း ဗိုလ်ထပ်စွဲ
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ တာဝန်ယူမယ့် မော်ရင်ဟို
နှလုံးသားက စကားသံကို နားထောင်ပြီး ဘာစီလိုနာသို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ နေမာ